Adeegga Ultherapy ee ugu Fiican iyo Bixiyaha | Hongyu
Ultherapyist waxa kaliya oo ah FDA-nadiifisay, oo ah hab aan duullaan lahayn oo kor u qaada qoorta, garka iyo wejiga, oo hagaajisa xariiqyada iyo laalaabyada laabta sare. si aad u hesho natiijooyin dabiici ah
sii fiicnaado waqti ka dib.1-3
Daaweynta Ultherapy waxay ku tiirsan tahay daaweynta ultrasound si ay uga qoto dheer tahay daweynta kale ee aan duufsanayn ee kicinta kolajka.
Sawirada ultrasound -ka dhaqameedka si bixiyeyaasha Ultherapy ay u arki karaan lakabyada unugyada ay daaweynayaan Tani waxay xaqiijinaysaa daaweynta
tamarta waxaa la geeyaa meesha aad sida ugu badan uga faa'iideysato, 1,2,4
Kuwa aan diyaar u ahayn waji hagaajin, daaweynta Ul waxay siisaa wax -ku -ool ahaan hal daaweyn oo bukaannada badankood ah, oo leh natiijooyin. Baro sida aan loo furin qalliinka, ma saameynayo dusha maqaarka, aan joogsi lahayn si loo daweeyo maqaarkaaga dabacsan
Ultherapy waxay isticmaashaa ultrasound -ka mikrofocused si loo abuuro saameyn kuleyl maqaarka hoostiisa. Saameyntani waxay si dhab ah ugu booddaa-bilaabaysaa hab-socodka jidhkaaga si aad u abuurto mid cusub oo cusub
Sida borotiinka dabiiciga ah, kolajka wuxuu u shaqeeyaa inuu maqaarka siiyo dhallinyaranimadiisa isagoo adkaynaya oo adkaynaya. Markaan sii gabowno kollagen, oo natiijadu waa luminta xoogga maqaarka iyo
elasticity2Waa halkaas meesha Ultherapy -ku soo tallaabsato oo kor u qaado, iyada oo loo marayo daaweynta ultrasound12
HALKAN MA QALIN
Si ka duwan lasers -ka, soo noqnoqoshada raadiyaha, qalliinka, iyo farsamooyinka kale, Ultherapy -ka aan qalliinka lahayn wuxuu ka gudbaa dusha maqaarka
tamarta ultrasound oo leh sawir diirad saaran-si loo beegsado xaddiga saxda ah ee saxda ah
qoto dheer iyo heerkulka saxda ah. Natiijadu waxay ku soo boodaysaa wax-soo-saarka kolajka ee jirkaaga 1.3-3
Natiijooyinka la xaqiijiyay ee Ultherapy waa cad yihiin,
soo muuqanaya in ka badan laba illaa saddex bilood markii kolajka cusubi ka shaqaynayo kor u qaadista maqaarka qoorta, garka, iyo wejiga-iyo sidoo kale maqaarka siman ee xabadka sare. Natiijooyinka ayaa laga yaabaa inay soo fiicnaadaan saddexda illaa lix bilood ee soo socda, waxayna socon karaan sannad ama ka badan
beddel aan caafimaad lahayn oo caafimaad ahaan la xaqiijiyay oo loogu talagalay kuwa aan diyaar u ahayn qalliin.1.67
*Natiijooyinka way kala duwanaan karaan.
Daaweynta Ultherapy waxaa lagu heli karaa oo keliya shati